How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Ngingazivikela kanjani izingane zami uma ziphumela ngaphandle ukuyozivocavoca noma ziya esikoleni? – Messages for Mothers
How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Ngingazivikela kanjani izingane zami uma ziphumela ngaphandle ukuyozivocavoca noma ziya esikoleni?
Ngaphezu kokufaka isifihla-buso sezingane ezineminyaka emibili nangaphezulu
Khumbuza izingane zakho ukuthi ziqhelelane ngokugcina cishe amamitha ayi-1-2 ukusuka kwabanye abantu, kuhlanganise nabangane bazo.
Ungasebenzisi imishini yokudlala noma ezinye izinto okungenzeka zithintwe ngabantu ongabazi.
Hlanza izandla njalo bese ugeza izandla zezingane zakho lapho zibuyela ekhaya.
zingayisebenzisa kanjani i-sanitiser yezandla ngokuphepha: zihlikihle izandla zize zome ngokuphelele.
Zingazigeza kanjani izandla ngokuphepha: zimanzise izandla zazo, zigcobe insipho imizuzwana engama-20 ngenkathi zicula ingoma eziyithandayo, bese ziziyakaza.
inhlanzeko yokuphefumula. Lokhu kusho ukukhwehlelela noma ukuthimulela endololwaneni yayo egobile emboze umlomo namakhala, noma ethushwini okufanele iyiphonse ngokushesha esitsheni esivaliwe bese igeza izandla.
zigweme ukuthinta ubuso bazo.
← What if my child is in contact with someone with COVID-19: Kuthiwani uma ingane yami ixhumana nomuntu one-COVID-19? → What to know about the spread of COVID-19 in children and babies: Ukusabalala Kokutheleleka